China Drum uhlobo shot blast umshini ifektri abakhiqizi | TAA
Izinzuzo zomshini wokuqhuma wesigubhu
Esinokwethenjelwa ukuqhumisa Technology: Imishini yokuqhuma yesigubhuzenziwa ngokuhlukahluka okuhlukahlukene, izinhlobo nosayizi. Zihlangene futhi zinezinyathelo ezincane kakhulu. Ukuhamba okuqhubekayo kungatholakala ngokuxhumanisa imishini eminingana.
Isakhiwo esinobungani besondlo:Ukugcinwa njalo kubalulekile ekulondolozeni inani lesikhathi eside semishini. Izinsizakalo ezinkulu kanye neminyango yokuhlola inikezela ukufinyelela okulula kuzo zonke izinto ezibalulekile. Ngenxa yalokho, izingxenye zokugqoka zingashintshwa kalula.
Ubuchwepheshe Bokuhlunga Obusha:Uhlelo lokuhlunga olusha luhlaba umxhwele ngokusebenza okuphezulu. Isici sesici esithakazelisa kakhulu ama-cartridge wokuhlunga ayindilinga angashintshwa ngokushesha futhi kalula ngaphandle komshini ngenxa yesilayidi sawo. Lezi zinhlelo zokuhlunga ezisekelwa igobolondo zingaphinde zenziwe kabusha ngisho nasemishini yakudala yokuqhuma cishe yabo bonke abanye abakhiqizi.
Umklamo oqinile: Umklamo oqinile owenziwe ngensimbi emelana nokugqokwa kakhulu nolwelwesi olwengeziwe lwezindawo ezivezwe ukugqoka zisekela opharetha ukuvikela okwakhe utshalomali.
* Inani lezingxenye zokugqoka lehliswe kakhulu (uma kuqhathaniswa nemishini yensimbi yokuqhuma isibhamu) ngenxa yesigubhu esikhethekile.
* Ukunyakaza kokuzulazula okuthambile nokujikeleza kwesigubhu kwenza ukuphathwa ngobumnene kwezingxenye.
* Ukwakhiwa kwesigubhu kuncike ezingxenyeni ezizolashwa.
Ukuma nokuklanywa kwendawo engezansi nezindonga eziseceleni kuqinisekisa ukwehla okukhulu kwezingxenye.
* Ukugcotshwa kwesigubhu kutholakala ngokuhambisana nezimfuneko ze-specififi c eziphathelene nezingxenye nolaka. Lokhu kuvimbela ukuminyana, futhi okukhiphayo kungakhishwa ngokuphelele.
* Imishini yokuqhuma kwesigubhu isetshenziselwa kakhulu ukwelapha izingxenye ezincane ezikhiqizwa ngobuningi.
Imishini yokuqhuma yesigubhu ayatholakala ngosayizi abajwayelekile abalandelayo:
Imininingwane Yezobuchwepheshe TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Ivolumu yevolumu (1)
I-turbine esebenza kahle kakhulu (ubuningi)
I-turbine esebenza kahle kakhulu (kW)
7.5 kufika ku-15 kufika ku-22 kufika ku-30
Ukuhanjiswa kwe-Abrasive isikulufa isikulufa isikulufa isikulufa
Ipulatifomu yesondlo ngaphandle yebo yebo yebo
Iyunithi lokuhlunga leCartridge PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12
Okunye okungeziwe nezici kungenzeka.
Langaphambilini Ukugaya amasondo FW-09 chungechunge
Olandelayo: Carbon steel cut wire shot
Okuzenzakalelayo Shot ukuqhumisa Machine
umshini wokuqhuma Uhlobo lweDrum
China Shot ukuqhumisa Machine
Umshini wokuqhuma we-Drum
Emshinini weDrum Shot Blast
Izinto ezitholakalayo zezingxenye zokungasebenzi Okuqukethwe kwe-Cr-12%, 20%, 25% noma njengesicelo. Izici Zomkhiqizo Inqubo yokuphosa ngobuchwepheshe esithuthukisiwe nesayensi. Ukusebenza kahle okuphezulu kanye nomugqa wokukhiqiza owenziwe othomathikhi ozenzakalelayo. Special high chromium nemihuzuko ekubunjweni izingxenye zensimbi ezisele, okwenza izikhala embonini yasekhaya. Izingxenye Zokusebenza Zokuqala Ezenziwe (i-OEM) ziyatholakala. Siphinde sinikele ...